VIDEO: In ka badan laba milyan qof oo maanta taagan buurta Carafo – Maanta Online
VIDEO: In ka badan laba milyan qof oo maanta taagan buurta Carafo
Magaalada Makka ee wadanka Sacuudi Carabiya waxaa maanta ka baxay in ka badan laba milyan qof, kuwaasi oo gaaray buurta Carafo si ay u gutaan acmaasha Xajka.
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sanadkaan kordhisay ammaanka malaayiinta xujeyda ah ee isaga kala yimid dalalka caalamka, iyadoo halkaasi geysay ciidamo, gaadiid kala duwan oo isugu jira kuwo rakaab ah iyo kuwo kale oo sida qalab caafimaad.
Goobaha barakeysan ee magaalada Makka ayaa ah sanadkaan kuwo si casri ah loo dhisay, taasi oo sanad kasta ay dhibaato ku qabeen xujeyda isla markaana loo sameeyay meelo waddooyin ah si aanu halkaasi uga dhalan is buurasho.
Dowladda Sacuudiga ayaa sanadkaan dalkeeda horay uga mamnuucday xujeyda ka imaaneysa qaar ka mid ah dalalka uu ka dillaacay cudurka Epola iyadoo soo xiganeysa warbixin hay’adda caafimaadka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee WHO loo yaqaano.
← Madaxweyne Farmaajo oo munaasabadda Ciidul Adxaa awgeed farriin u diray shacabka Soomaaliyeed
Maka bixi lahayd Qabiilkaaga? →
Rag kufsi iyo dil isugu daray gabar da’ yar oo Maxkamadda Puntland dil toogasho ah ku xukuntay
Haweeney sheegtay in tacadi loo geystay dartiis ay ugu biirtay ciidamada DANAB
Wiil ay iska dhaleen Somali iyo Swedish oo ka badiyay caruurta ku kortay qurbaha + Daawo